Wasiir ku xigeenka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha XFS oo London kula kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir ku xigeenka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha XFS oo London kula kulmay Jaaliyadda...
Wasiir ku xigeenka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha XFS oo London kula kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed
Kulan casho sharaf ah oo lagu soo dhaweenayay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Cumar Islow oo baryahan ku sugnaa dalkan Ingiriiska ayaa xalay lagu qabtay magaalada London.
Waxaa ka soo qeygalay qaar kamid ah cayaaryahanadii hore ee Soomaaliya, waxaa kaloo marti sharafta ka mid ahaa guddoomiyaha xiriirka cayaaraha fudud Marwo Khadiijo Aadan Axmed oo dhawaan wafdi ay hogaaminaysay kaga qeybgaleen magaaladan London tartankii ciyaaraha fudud ee aduunka.
Mudane Axmed Cumar Islow Wasiir ku xigeenka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay qorshaha Wasaaradda ee ku aadan sidii loo horumarin lahaa Ciyaaraha Soomaaliya, isagoo bogaadiyay hadaladii dhiira galinta ahaa ee qurbo joogtu ka muujiyeen sida ay ugu heelayihiin hormarinta Ciyaaraha guud ahaan, gaar ahaan bahda Ciyaaraha.
Qaar kamid ah dadkii goobta ka hadlay ayaa uga warbixiyay Wasiir ku xigeenka xaaladda dhallinyarada iyo ciyaaraha Qurba joogta ku sugan dalka Ingiriiska, iyagoo xusay in ay Dolwadda Soomaaliya ay dhiirogelin uga baahan yihiin.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Ka hadashay Dad shacab ah oo Shabeelaha Hoose lagu dilay.
Next articleXarunta Maamulka Internet-ka Hay’adda Dowladda oo la hirgeliyay